कांग्रेस नेतृत्वको लागि अझै भेटिएन साझा उम्मेदवार, दाउमा दोस्रो तहका नेताहरु « Image Khabar
कांग्रेस नेतृत्वको लागि अझै भेटिएन साझा उम्मेदवार, दाउमा दोस्रो तहका नेताहरु
Imagekhabar १९ भाद्र २०७८, शनिबार १८:३०
काठमाडौं, भदौ १९ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको आकांक्षा राखेर नेताहरुका नाम सार्वजनिक भएपनि पदाधिकारीमा एकाधबाहेक खुल्न सकेका छैनन् । कतिपय नेता सभापतिमा दावी गरेर पदाधिकारी हत्याउने दाउमा छन् । यद्यपि साझा उम्मेद्वार चयनमा संस्थापन र इतर दुवै जोखानामा मग्न छन् । साझा उम्मेद्वार अघि सार्न पौडेल पक्ष पटक-पटक छलफलमा जुटेपनि माछा माछा भ्यागुतो हुने गरेको छ ।
संस्थापन इतर पक्षबाट पार्टी नेतृत्वका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यद्धय शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीले दावी गरिरहेका छन् । नेतृत्वका आकांक्षीमध्येका डा.महत र केसी वरिष्ठ नेता पौडेललाई साझा उम्मेद्वार बनाउने शर्तमा पछाडि हट्ने तयारीमा छन् । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई आसन्न महाधिवेशनबाट विस्थापित गर्नुपर्नेमा इतर पक्ष एकमत छ । तर, देउवालाई विस्थापित गर्ने गरी साझा पात्र खोज्न सफल हुन सकेका छैनन् । आसन्न महाधिवेशनमा देउवाविरुद्ध साझा उम्मेद्वार तय गर्न पटक-पटकको प्रयास सफल हुनसकेको छैन् । तर, इतर पक्षका नेताहरु साझा उम्मेद्वार अघि सार्ने दावी गर्न छोडेका छैनन् ।
आफ्नो पक्षबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्न इतर पक्ष निरन्तर छलफलमा रहेपनि किन साझा उम्मेद्वार तय गर्न सकिरहेका छैनन त ? राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश गौतम ।
जतिपटक छलफल र प्रयास गरेपनि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुबीच एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन् । वर्तमान पार्टी नेतृत्वको विस्थापित र आगामी नेतृत्वको लागि आफू नै सक्षम रहेको बुझाई संस्थापनइतरका नेताहरुको छ । नेतृत्वका आकांक्षीहरुको यही इगोका कारण साझा उम्मेद्वार तय हुने सम्भावना साँघुरो हुँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
आकांक्षीहरुले पार्टी नेतृत्वका लागि आफूलाई सक्षम दावी गरेपनि संस्थापन इतर पक्षबाट तीन जना उम्मेद्वार बलियो देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
इतरजस्तै संस्थापन पक्षबाट पनि सभापति देउवासहित विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठले नेतृत्वको आकांक्षा देखाएका छन् । संस्थापन होस् या इतरपक्ष आसन्न महाधिवेशनको लागि आफ्नो समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्न दुवै समूहलाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ ।